लोकगीतकै भ्यूजमा भर परेर फिल्म चल्छ त ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsलोकगीतकै भ्यूजमा भर परेर फिल्म चल्छ त ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अभिनेता अनमोल केसीको गीत रोजाइको परिवर्तन सबैका लागि आश्चर्य लाग्दो छ । कुनै समय हुर्कलस बस्नेतका निकै नै फरक र यूवालाई मात्र फोकस गरिने गीतमा रमाउने अभिनेता अनमोल केसी हिजोआज लोकलयका गीतमा पनि रमाउन थालेका छन् ।
अभिनेता केसीमा देखिएको यो परिवर्तनको कारण के होला ? फिल्म गाजलुसम्म आइपुग्दा अभिनेता केसीको रोजाई एउटै थियो । सिनेमा कृमा पनि उनले गीत रोज्न जानेनन् । आफ्ना फ्यान र एउटा सानो टुकडीमा मात्र उनी सिमित थिए ।
तर, सिनेमा क्याप्टेनमा उनले रहर छ सँगै जस्तो प्रेमगीत र कर्ली कर्ली कपाल जस्तो लोकगीत रोजे । यसको पछाडि कारण थियो, बजारको माग । बजारको मागले यस्तै गीत खोजेपछि अभिनेता केसीले आफूलाई पनि परिर्वतन गरेका थिए ।
उनले रोजेको ए मेरो हजुर ३ को परान परान बोलको गीत त झनै फरक छ । बजारमा अहिले लोकलयको गीत सिनेमामा राख्नैपर्ने चलन चलेको छ । अभिनेता अनमोल केसी पनि सोही परिवर्तनमा रंगिएका हुन् ।
अभिनेता केसी मात्र होइन, अहिले सिनेमामा स्टार भनिएका कलाकार हुन् या नाम चलेका अनुहार, सबैलाई यस्तै खालको गीत चाहिएको छ । कि त अर्जुन पोखरेलको लभ गीत, कि त राजनराज सिवाकोटी लगायतको लोक गीत । बजारले कलाकारलाई यस्तै गीतमा परिवर्तन गरिदिएको छ ।
तर, बजारले थोरै कुरा पायो भने मिठो मान्छ । धेरै कुरा पायो भने तितो मान्न थाल्छ । अहिले यस्तै भएको छ । सिनेमामा एउटा लोकगीत राखिदियो भने दर्शक हलसम्म आइहाल्छन् नी भन्ने भ्रममा निर्माता छन् । यसैले सबै सिनेमामा आवश्यक परेपनि नपरेपनि एउटा लोकगीत थोपर्ने चलन चलेको छ ।
तर, यसरी लोकगीत धेरै हूँदा बजारले यसको माग धान्न छाडेको छ । अझ, यसो भन्न सकिएला दर्शकले लोकगीत कुन सिनेमाको हो नै चिन्न छाडेका छन् ।
लुट २ सिनेमा चल्दा दर्शकले काले दाई काले दाई बोलको गीत यसै खोजेका थिएनन् । निखिल उप्रेती, दयाहाङ राइदेखि नाम चलेका र नचलेका सबै कलाकार लोकगीतमा नाच्न थालेका छन् ।
लोकगीतले पाउने भ्यूज पनि राम्रो छ । कलाकार जो भएपनि सिनेमामा राखिने लोकगीतले भ्यूज राम्रै पाएको छ । तर, त्यही भ्यूजको पछाडि लागेर निर्माताहरु सिनेमा चल्नेमा ढुक्क छन् ।
गीतसंगीत सिनेमा चल्ने एउटा पाटो त हो । यो कुरालाई नकार्न सकिदैन । तर, सम्पूर्ण आशा नै एउटा गीतमाथि थोपर्दा दर्शक हलसम्म आउँदैनन् । लोकगीतमा देखिने भ्यूज र ट्रेन्डिङमा रमाएका निर्माताहरु आफ्नो सिनेमाको गीत पार्टी र बिहेमा मात्र बज्ने, तर हलमा दर्शक नआउने हुँदा मर्कामा पर्न थालेका छन् ।
सिनेमा चल्ने आधार एउटा गीत मात्र होइन, गीत पनि हो । यसैले गीत पनि हो भन्ने वुझेर सिनेमा बनाउन आवश्यक छ । होइन भने लोकगीत बनायो, नाचिदियो अनी सिनेमा चल्छ भन्ने भ्रममा मख्ख नपरेपनि हुन्छ ।
बलिउड सेक्सी स्टारको होलिडे ( फोटो फिचर )
नेपाली अवार्डः भित्री खोक्रो बाहिर बोक्रो
December 2, 2018 Tulasa Karki Event, Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – नेपालमा गरिने अवार्ड समारोहमा कलाकार पुगे भने अचम्म नै मान्दा हुन्छ । किनकी, अहिले कलाकारका लागि वितृष्णा बनेको छ अवार्ड । मनपरी अवार्ड वितरण हुँदा कलाकारले पनि अवार्डबाट दुरी नै बनाउने सोच […]